Shaashadda Beyond: Sidee Blockchain u Saameyn Doonaa Suuqgeynta Saameynta | Martech Zone
Markuu Tim Berners-Lee ikhtiraacay World Wide Web ka badan soddon sano ka hor, ma uusan sii qiyaasi karin in Internetku u xuubsiiban doono inuu noqdo ifafaalaha meel walba leh ee ay maanta tahay, asal ahaan wuxuu beddelayaa habka ay dunidu u shaqeyso dhammaan dhinacyada nolosha. Kahor internetka, carruurtu waxay ku taami jireen inay noqdaan cirbixiyeenno ama dhakhaatiir, iyo cinwaanka shaqada saameyn or content abuure si fudud ma jirin. Hore u soco maanta iyo ku dhawaad ​​boqolkiiba 30 ee carruurta da'doodu tahay siddeed illaa laba iyo toban jir ayaa rajeynaya inay noqdaan YouTuber. Adduunyo kala fog, saw maaha?
Warbaahinta bulshada ayaa shaki la'aan ku dhiirrigelisay saamaynta saamaynta saamaynta meteoric ee suuq-geynta saamileyda leh noocyo loo qoondeeyay inay ku qarashgareeyaan US $ 15 bilyan 2022-ka ku saabsan iskaashatooyinka mawduucan. Suuqa ayaa kaliya laba jibaaray qiimaha tan iyo 2019, taas oo ka tarjumeysa awooda wax soo saarka suuq geynta bilyan-dollar. Haddii ay ansaxineyso shay raaxo badan oo aad loo jecel yahay ama qalabkii ugu dambeeyay, saameynayaashu waxay noqdeen meel loogu tago noocyo badan oo raadinaya inay gaaraan, ka qaybgalaan, oo ay ka codsadaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah.
Barashada Ciyaarta Lacag Sameynta, Lahaanshaha Sumaddaada
Caannimada suuqgeynta saameynta leh maahan sabab la'aan. Sannadkii 2020 oo keliya, waxaan aragnay xiddiga ugu mushaharka badan YouTube-ka oo qaata US $ 29.5 milyan, iyadoo tobanka abuurayaal ee ugu sarreeya ay mushaharkooda u jiidayaan kor u dhaafaya US $ 10 milyan. Kim Kardashian, tusaale ahaan, waxay iibisay cadarkeeda daqiiqado gudahood kadib markii 12 milyan oo daawadayaal ah ay lasocdeen barnaamijyadeeda tooska ah, halka kuwa saamaynta ku leh TikTok ay bilaabeen wax soo saar iyo sumado kor u qaadaya shaxda caanka ah. Taasi waa sheekada A-liis gareystayaasha ama kuwa ku guuleystey inay ku qarxaan goobta, iyagoo labada caanood iyo guul uga hela dhagaystayaashooda.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhinac kale oo ku saabsan sheekada saameynta leh oo inta badan la dayacay iyada oo ay jirto buunbuunin iyo buuq saameeya ugu dambeeyay uguna kulul. Midna, firfircoonida firfircoonida firfircoonida ayaa inta badan waxyeelleyn kara ciyaartoy cusub ama niche. Caqabadaha sare ee YouTube ee lacag-ururinta ayaa maskaxda ku haya - marin u helka dakhliga xayeysiinta ayaa kaliya loogu talo galay hal-abuurayaasha horeyba u ururiyey dhagaystayaal kor u dhaafaya 1,000 halka celceliska abuuraha uu kasbado kaliya $ 3 ilaa $ 5 halkii kun oo muuqaal video ah. Lacag aad u yar oo qurxoon oo loogu talagalay warshadaha noocaas oo kale ah. Markaas waxaa jira kuwa jira laga faa'iidaysto astaamaha - haddii ay tahay xatooyo sawirro, qorista qandaraasyo sharci darro ah, lacag-bixinno, ama ku-qasbid saamileyaal inay ku shaqeeyaan lacag la'aan. Laga soo bilaabo abuuritaanka nuxurka illaa fulinta nuxurka, saamileyaashu waxay u muuqdaan inay qaadayaan mas'uuliyadda ololaha oo dhan, waana in si cadaalad ah loogu magdhabaa shaqadooda.
Marka la raadinayo in la abuuro dhaqaale wax ku ool ah oo waxtar leh, sidee haddaba abuurayaashu wax ugu abuuri karaan si madaxbanaan dhiska astaantooda iyagoo hubinaya inay iyaguna ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii?
Xannibaadda ayaa noqon karta hal dariiq oo lagu maro tan.
Mid ka mid ah dalabka noocaas ah ee xannibaadda ayaa ah calaamadeyn - geeddi-socodka soo saarista calaamadda xannibaadda oo si dijitaal ah u matali karta lahaanshaha ama ka-qaybgalka hantida dhabta ah ee ganacsiga. Tokenisation ayaa si ballaaran looga hadlay bilihii la soo dhaafay, ka dib kiisaska isticmaalka ee dhammaan warshadaha kala duwan ee ku saabsan isboortiga, farshaxanka, maaliyadda, iyo madadaalada. Xaqiiqdii, waxay dhowaan uun ka soo muuqatay bogagga bulshada iyada oo la bilaabay BitClout, oo ah barxad ku shaqeysa xannibaadda oo u oggolaaneysa dadka inay iibsadaan oo iibiyaan astaamo matalaya aqoonsiyadooda.
Sidaa si la mid ah, abuurayaashu waxay ka heli karaan koontarool ballaadhan, madax-bannaanid, iyo lahaanshaha astaantooda iyagoo bilaabaya astaantooda u gaarka ah - haddii ay tahay inay iyagu is ixtiraamaan ama fikradahooda - oo ay si fiican uga faa'iideystaan ​​waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo astaantooda iyagoo aan ku tiirsanayn oo keliya dakhliga xayaysiinta madal.
Awood u leh xannibaadda, adeegsiga qandaraasyada caqliga ayaa sidoo kale ka caawin kara saamileyaasha inay hubiyaan in lacag bixinta waqtigeeda la sameeyo ka dib olole kasta oo la dhammeeyo. Qandaraasyada caqliga leh waxaa lagu qeexay shuruudo horay loogu heshiiyey oo ay dejin karaan noocyada iyo saamileyda labadaba. Marka heshiiska la gaaro, lacagaha si otomaatig ah ayaa loo wareejin karaa iyadoon cajaladda casaanka ee dhinac saddexaad ka gaabin hawsha.
Qiimaha Wadista ee Daahfurnaanta
Maaddaama adduunku wareejinayo qalabka, sidoo kale sidoo kale warshadaha suuqgeynta ayaa isbedelaya. Astaamuhu waxay u adeegsanayeen miisaaniyadaha xayeysiiska qaabab badan oo dhijitaal ah oo xayeysiis ah si ay u gaaraan dhagaystayaasha si tartiib tartiib ah noloshooda ugu dhaqaajiyay khadka tooska ah. In kasta oo suuqgeynta saameyntu ay noqon karto isbeddelka xilligan, haddana noocyo badan waligood ma arkin xiriir toos ah oo u dhexeeya suuqgeynta ku saleysan saameynta iyo kor u qaadista iibka, taas oo ka dhigeysa kuwa xayeysiistayaasha ah inay ka shakisan yihiin saameynta abuurayaashaan.
Tani waxay si gaar ah u tahay marka dhibaatada 'khiyaanada raaca' ay ku faafto guud ahaan baraha bulshada. Qaado tusaale ahaan saameyn ku leh boqolaal kun oo taageerayaal ah. Hase yeeshe, ka qayb qaadashada shaqooyinkooda way hooseeyaan, iyagoo si dhib yar u garaacaya saddex lambar. Waxa inta badan ku dhaca kiisaska sidan oo kale ah ayaa ah in saameyntu ay iibsatay kuwa raacsan. Ka dib oo dhan, oo leh boggaga sida Xaasidnimada Bulshada iyo DIYLikes.com, waxa kaliya ee ay qaadataa waa wax aan ka badnayn lambarka kaarka deynta si loo iibsado ciidan bots barnaamij kasta oo baraha bulshada ah. Iyo aalado badan oo warbaahinta bulshada ah oo loogu talagalay inay la socdaan guusha kaliya ee ku saleysan cabbiraadaha sida tirinta raacsan, 'khiyaanadan' badiyaa lama ogaan karo astaamo. Tani waxay ka tagi kartaa sumadaha wareersan, oo aan hubin sababta waxa u muuqday olole rajo leh oo rajo leh uu ku dhammaaday guul darro.
Mustaqbalka saameynaha ROI waxaa been abuuri kara xannibaadda, iyadoo tikniyoolajiyaddu awood u leedahay inay bixiso daah furnaan ballaaran oo loogu talagalay noocyada raadinaya inay xaqiijiyaan saamileyaasha ayna ansaxiyaan soo noqoshadooda maalgashiga. Si la mid ah saamileyaasha calaamadeeya waxyaabaha ay ka kooban yihiin, magacyadu waxay calaamadin karaan macaamilkooda macaamil abuureyaasha. Tusaale ahaan, magacyadu waxay xaqiijin karaan in tirakoobka saamaynta ee saamaynta, macluumaadka ku saabsan sumcaddooda iyadoo lagu saleynayo waxqabadkii la soo dhaafay, iyo qiimaha la saadaaliyay ee iskaashigu ay ku xiran yihiin qandaraasyo caqli badan oo lagu heshiiyey ka hor ololaha, si loo helo is-weydaarsi hufan oo ammaan ah oo ballan qaada natiijada ololaha. Intaa waxaa sii dheer, ka takhalusida dhexdhexaadiyeyaasha aan loo baahnayn, xannibaadda ayaa xitaa gacan ka geysan karta yareynta khidmadaha dheellitirka ee dheeraadka ah iyo in la yareeyo kharashka suuqgeynta ee dhaqaalaha halka dhimista miisaaniyadu ay sii kordhayaan.
Khadka Tooska ah ee Dhexmara Dunida Taageerayaasha iyo Hal-abuurayaasha
Adduunyada dhijitaalka ah ee ay xukumaan macluumaadka khaldan, saameyntu waxay si dhakhso leh u heleen raad adag markii ay timaado inay noqoto cod awood leh ha ahaato inay dhiirrigeliso sumcadda ay jecel yihiin ama ay ka hadasho arrin u dhow qalbigooda. Gaaritaanka iyo saameynta saameyntu ku leeyihiin bulshada lama soo koobi karo, iyadoo boqolkiiba 41 macaamiisha oo sheegaya in saamileyaashu ay u adeegsadaan barnaamijyadooda si wanaagsan. Taa bedelkeeda, boqolkiiba 55 suuqleyda ayaa dareensan inay taxaddar la yeelan doonaan la shaqeeynta kuwa wax ku oolka ah ee ka hadla arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Xiisadan udhaxeysa noocyada iyo saamileyaasha waxay ka dhigan tahay in loo baahan yahay saamileyaal in ay isku dheelitiraan is xakameynta si loo ilaaliyo sumcadda sumcadda iyo ka jawaabidda beeshooda iyo guud ahaan dadweynaha.
Hase yeeshe, ka waran haddii wax-saameyn uu go'aansado inuu ka hadlo sabab ay aaminsan yihiin oo ka soo horjeedda sharciyada astaanta? Ama ka waran haddii wax-saameyn uu doonayo inuu si fiican ugu xirnaado oo uu xiriir dhow la yeesho raacdadiisa? Tani waa meesha shabakadda baahinta ee blockchain ay u imaan karto si ay u xirto adduunyada taageerayaasha iyo abuurayaasha, ka saarista dhexdhexaadiyaha - kan ka socda goobaha ama noocyada - iyo baahida loo qabo dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Iyada oo la adeegsanayo xannibaadda, abuurayaashu ma aha oo kaliya inay helaan madax-bannaanida hantidooda laakiin waxay sidoo kale helaan marin ay ku yeeshaan beeshooda, taasoo ku lug leh ka-qaybgal ballaadhan taageerayaasha. Tusaale ahaan, iyaga oo leh astaamo u gaar ah oo ku saabsan xannibaadda, saameyntu waxay awood u yeelan doonaan inay si aan muuqan u abaalmarin oo u dhiirrigeliyaan kuwa raacsan si toos ah. Sidoo kale, bulshada taageereyaasha ah waxay sidoo kale wax ka dhiiban karaan noocyada ay ka kooban yihiin waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen inay arkaan, iyagoo sii kobcinaya heer qoto dheer oo ku lug lahaansho u dhexeeya abuure iyo taageere.
Hal abuurayaal la'aan, aaladaha ma awood badna, calaamaduhuna waxay ku sii jiri karaan hooska. Marka dib loo qiimeeyo dhaqaalaha saamaynaya cadaaladda ee abuureyaasha iyo astaamaha labadaba, waxaa loo baahan yahay isku dheelitirnaan weyn oo xagga awoodda ah iyo xannibaadda ayaa furi karta furaha mustaqbal suuq geyn firfircoon - mid ka hufan, madaxbannaan, iyo abaalmarin.
Tags: blockchainabuurayaashataageerayaashasaameynsuuqgeynta suuqgeyntajaangooyntajaangooyntacalaamadinqulqulkacalaamadaha